July 15, 2021 - Celegroup
July 15, 2021 cele group 0
လျှပ်စစ်မီတာကောက်ခံခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ သတိပေးထုတ်ပြန်ချက် ၁။ ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက် ကိုဗစ် ​ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကာလမှာ လျှပ်စစ်မီတာခကောက်ခံရာတွင် ပြည်သူကို အမျိုးမျိုးငဲ့ညှာပြီး ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူဆောင်လိုက်သော အခွန်မှာလည်း ပြည်သူထံသို့ အကျိုးရှိရှိ ပြန်လည်စီးဆင်းစေခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူပိုင်သည့် လျှပ်စစ်မီးဟာ ပြည်သူ့အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ၂။ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ပြည်သူအသိအမှတ်မပြု၊ ကမ္ဘာကအသိအမှတ်မပြုသည့် လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် အုပ်စုသာဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့အခွန်ဖြင့် ပြည်သူကို အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျသည့် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် အစိုးရမဟုတ်သလို၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်စရာလည်း မလိုအပ်ပါ။ […]
ကျွန်​တော်မ​သေ​​သေးဘူး ကျွန်​တော့်ကိုယ်​တွေ့ပါ မ​နေ့က မနက်၆နာရီမှာအိပ်ယာနိုး​တော့ ကိုယ်လက်နဲနဲနာသလိုနဲ့အနံ့​ပျောက်သလိုခံစားရတယ်…Breakfastစား​တော့လဲ အနံ့မရ​တော့ အနံ့​ပျောက်​နေပီးဆိုတာသိရတယ်…​မေ​မေဆီဖုန်းဆက်​ပြောပြတယ် ဒီမနက်အနံ့​ပျောက်​နေတယ်..ဘာအနံ့မှမရဘူး…ပီး​တော့ ကျွန်​တော် အကိုက်ခဲ​ပျောက်​ဆေးတစ်လုံး​သောက်တယ်…၁၀နာရီခွဲလောက် ကျွန်​တော် အသက်ရှူကြပ်လာတယ်… ကျွန်​တော့်အ​မေနဲ့ကျွန်​တော့်အသိမိတ်​​ဆွေ မအိအိဆီ ဖုန်းဆက်ပီး​​ပြောပြတယ်…အသက်ရှူကြပ်တဲ့အချိန်မှာ ​ဇော​​ချွေး​တွေပြန်လာတယ်…​မောလာတယ်…လက်ဖျား​တွေ​အေးစက်လာတယ်…အသား​​​တွေဖြူ​​ဖျော့လာတယ်..အရက်အရမ်းမူးသလို ချာချာလည်​နေတယ်…သတိလစ်ချင်သလိုဖြစ်လာတယ်…​တော်​တော်​လေးလဲ​​ကြောက်​နေမိတယ်…​သေ​တော့မယ်ဆိုတဲ့အသိဝင်လာတယ်.. ချက်ချင်းဘဲ ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပီးဝါး​တော့တာဘဲ…ကြက်သွန်နီဝါးပီး အရည်မျိုချတဲ့ စက္ကန့်ပိုင်း အချိန်မှာ လည်​ချောင်းတစ်ခုလုံး ပူလာတယ်…​ဇတ်​ကြော​နေရာက​နေ ငယ်ထိပ်ထိ ပူတက်လာပီးတာနဲ့ နှာ​ခေါင်းထဲက​နေ အရည်​တွေ အများကြီးစီးလာ​တော့မှ ကျွန်​တော်အသက်ရှူလို့ရသွားတယ် ….ဒီ​နေ့လဲအနံ့​ပျောက်​နေ​ပေမဲ့အသက်ရှူကြပ်တာမရှိ​တော့လို့ အသက်ရှင်​နေဆဲဖြစ်ပါတယ်… (​အသက်ရှူကြပ်လာပြီးခြေလက်ခြေတွေ မလှုပ်ချင်သလို […]
အကယ်၍ ကိုဗစ် မိမိမှာ ဖြစ်နေပြီလို့ သံသယရှိလျှင်
အကယ္၍ ကိုဗစ္ မိမိမွာ ျဖစ္ေနၿပီလို့ သံသယရွိလၽွင္ အိမ္တြင္း၌အလြယ္ကူဆုံးနဲ႔ ၊ေငြကုန္သက္သာဆုံး ေရွးဦးသူနာျပဳစုကုသရန္နည္းလမ္းမ်ား ။ တစ္ခ်က္ခ်င္းေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ေပးပါ။ လည္ေခ်ာင္း စူးရွ႕ရွ႕ နာခ်င္လာရင္ဆားေရေႏြးနဲ႔ ေခါင္းေမာ့ၿပီး ပလုပ္က်င္း လည္ေခ်ာင္းေဆးပါ၊ တစ္ေန႔လၽွင္ 1မိနစ္ခန္႔3ႀကိမ္။ စူးရွမွု ပိုျပင္းထန္လာရင္ ဆားေရအျပင္ ၾကက္သြန္ျဖဴ အတက္ခြာၿပီး ဖိကိုက္လိုက္ပါ၊ ပူၿပီးစပ္တဲ့ အရည္ ထြက္လာမယ္။အပူေငြ႕ကို အဆုတ္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ရွူသြင္းၿပီး10 စကၠန္႔ အသက္ေအာင့္ထားပါ၊ေရာဂါ ရဲ့ […]
ေရသန႔္တစ္ခြက္နဲ႔တူတဲ့ မိန္းကေလးေတြကို တန္ဖိုးထားၾကပါ…
ရေသန့်တစ်ခွက်နဲ့တူတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို တန်ဖိုးထားကြပါ… ညီမလေးလည်း ရေသန့်တစ်ခွက်လိုဖြစ်ပါစေ …။ ရေသန့်တစ်ခွက်နဲ့ တူတဲ့ဖြူစင်တဲ့ မိန်းမတွေဟာ လျစ်လျူရူခံရတာ များပါတယ်။ ရေသန့်ဟာ အရသာကင်းမဲ့ပြီး အရောင်အဆင်း မရှိတတ်ပါဘူး …။ ရေဟာ ဖြူစင်ပါတယ်။ မစင်ကြယ်တဲ့ အရာတွေကိုတောင် စင်ကြယ်အောင် ပံ့ပိုးလျှော်ဖွတ် ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် ရေသန့်တစ်ခွက်နဲ့တူတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့တန်ဖိုးကို နားမလည်ကြပါဘူး။ အရောင်အဆင်း အနံ့အရသာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ အချိုရည်လို မိန်းမတွေကြတော့ ဂရုစိုက်ခံရတာ […]
“တစ်ချိန်မှာ အသုံးဝင်လာနိုင်တာမို့ ရှယ်ပြီး သိမ်းထားလိုက်ပါ”
သင့်အတွက်တစ်ချိန်မှာ အသုံးဝင်လာနိုင်တာမို့ ရှယ်ပြီးသိမ်းထားလိုက်ပါ(ဆေးနည်းတိုမှတ်စု ၄၅ နည်း) ၁-ဆီးသွားများလျှင်အနေခက်ဥသျှစ်ရွက်သုတ်စား ၂-ပါးစပ် နှုတ်ခမ်း တို့၌ ရေယုံပေါက် လေးညှင်းပွင့်သွေးလိမ်း ၃-ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော အားကုန်ခမ်းဧကရာဇ်မြစ်ကိုဆန်ဆေးရေ နဲ့ သွေးသောက် –မကျီးခေါက်သွေးသောက် ၄-မုတ္တယောင် (ဝှေးဥယောင်)ကျဆေးဝက်ကြိမ်ရွက်နဲ့ဆနွင်းစိမ်းတက်ရော ထောင်း အုံ၍ပတ်တီးစည်း ရေဆွတ်ဆွတ်ပေး ၅-နှလုံးရောဂါ ရုတ်တရက် မော ကြပ် အောင့်(1)ဂျင်းစိမ်းကိုဆားနဲ့တို့စား(လက်မလောက်)(2)မိတ်သလင်ကိုဆားနဲ့တို့စား(လက်မလောက်)ရေအေးတဝသောက် ၆-အိမ်မပျော်လျှင်ဒန်ကျွဲပင်ပြုပ်သောက် မဲဇလီရွက်ဟင်းချိုချက်သောက် လက်သုတ် သုတ်စား ၇-နှာခေါင်းသွေးလျှံကျောက်ချဉ်အမှုန့်ထောင်းရှူ ၈-ကင်းကိုက် အဆိပ်အတောက်ကျောက်ချဉ်သွေးလိမ်း(၃၉)သားအိမ်ကိုက် အကြောတက်(1)သက်ရင်းကြီးမြစ်(သို့)အခေါက် […]
သင့္အိမ္က ေရခဲေသတၱာထဲမွာ အနံ႔ေတြဆိုးဝါးေနရင္ ဒီလိုေလးေတြလုပ္လိုက္ပါ
သင့်အိမ်က ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အနံ့တွေဆိုးဝါးနေရင် ဒီလိုလေးတွေလုပ်လိုက်ပါ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ နံနေရင် ၁။ ရေခဲသေတ္တာရဲ့ မီးခလုတ်ကို ပိတ်ပြီး ပလပ်ကိုချွတ်ပါ။ ၂။ အထဲမွာရွိတဲ့ အစားအေသာက္အားလုံးကို ထုတ္လိုက္ပါ။ ၃။ ရေခဲသေတ္တာထဲက စင်တွေ၊ အောက်ဆုံးက အသီးအရွက်ထည့်တဲ့ ဇလားတွေ ကို အပြင်ထုတ်လိုက်ပါ။ ၄။ ဆပ်ပြာမှုံ့ကို ရေခပ်နွေးနွေးနဲ့ ဖျော်ပြီး မျက်နှာသုတ်ပုဝါသေးသေးလို ပျော့ပြောင်းနူးညံ့တဲ့ အဝတ်စမှာဆွတ်။ ၅။ ရေခဲသေတ္တာ အတွင်းပိုင်းတစ်ခုလုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ အထူးသဖြင့် […]
ဒီအိမ်မက် (၅)ခုက ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ….
ဒီအိမ်မက် (၅)ခုက ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ… အိမ်မက်ပညာရှင်တွေအဆိုအရ အိမ်မက်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝနဲ့မသိစိတ်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပက်သက်တဲ့ အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကို ပြောပြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အိမ်မက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုထိုးထွင်းသိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအိမ်မက်တွေဟာ မကြာခန ဒါမှမဟုတ် ရံဖန်ရံခါ မက်လေ့ရှိကြောင်း သင်သတိထားမိကောင်းထားမိပါလိမ့်မယ်။ အိမ်မက်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သူ့လူမျိုးရိုးရာဓလေ့အရ အဓိပ်ပါယျဖှင့ျဆိုပုံတှေ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာက Oneirologyလို့ခေါ်တဲ့ အိမ်မက်တွေနောက်ကွယ်က အဓိပ်ပါယျကိုလေ့လာတဲ့ပညာအရ စိတ်ပညာရှင်တွေဖွင့်ဆိုထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ..ဒီတော့ သင်မက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် လျစ်လျူရှုထားတတ်တဲ့ အိမ်မက် တွေက ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာအောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်.. ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့ […]
ရှင်သိရဲ့လား . . . . ကျွန်မတို့ မိန်းမသားဆိုတာ အချစ်ကို ယောက်ျားသားတွေထက် ပိုပြီး ကိုးကွယ်ချင်ကြတယ် တစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ပဲ သန်မာသန်မာ ကိုယ့်ချစ်သူဘေးနားရောက်တဲ့အခါ ရေဗူးတောင် မဖွင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ တကယ်တော့ ဂရုစိုက်မှုကိုလိုချင်လို့ပါ သူ ငါ့ကို ဂရုစိုက်ပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဘာမဟုတ်တာလေးက အစ ကြည်နူးချင်မိတာ ။ ရှင်သိရဲ့လား . . . .ကျွန်မ စိတ်ဆိုးတယ် စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာ အချော့ခံချင်လို့ ပစ်ထားခံချင်လို့မဟုတ်ဘူးလေအော် […]